Intlawulo kwi-1820s Yayinjalo Ingxabano Eyesongelayo ukuSahlukanisa iMelika
Umrhumo weentlonelo igama elivuthayo labasemzini lanikezela umrhumo odluliselwe ngowe-1828. Abemi baseMzantsi bakholelwa ukuba irhafu yokungeniswa kwamanye amazwe yayininzi kwaye ijoliswe ngokungafanelekileyo kwingingqi yabo yelizwe.
Imirhumo, eyaba ngumthetho entwasahlobo ka-1828, ibeka imisebenzi ephakamileyo kwimpahla engeniswe kwi-United States. Kwaye ngokwenza njalo kwadala iingxaki ezinkulu kwezoqoqosho eMzantsi.
Njengoko uMzantsi wawungeyona indawo yokuvelisa, bekufuneka ukuba ingenise impahla ekugqibeleni evela eYurophu (ngokuyinhloko iBrithani) okanye ukuthenga izinto ezenziwe eNyakatho.
Ukongeza ukuhlambalaza ukulimala, ngokucacileyo umthetho wawucwangcisiwe ukukhusela abenzi beNyakatho-ntshona.
Ngomrhumo okhuselekileyo ngokudala amaxabiso aphakamileyo aphezulu, abathengi baseMzantsi bafumene ebudeni obubi kakhulu xa bethengisa iimveliso ezivela kuMzantsi okanye nakwamanye amazwe.
Umrhumo we-1828 wenza enye ingxaki eMzantsi, njengoko yanciphisa ishishini kunye neNgilani. Kwaye, oko kwenza ukuba kube nzima ukuba isiNgesi sinike ikotoni ekhulile eMelika yaseMerika.
Uvakalelo olunzulu malunga neTariff of Abominations lwabangela ukuba uJohn C. Calhoun abhale ngokungacacanga iincwadana ezibeka ingcamango yakhe yokuchithwa kwempahla, apho awakhuthaza ngamandla ukuba amazwe angayinakuwuthobela imithetho yaseburhulumenteni. Ukuqhankqalaza kukaCalun ngokumelene nekarhulumente karhulumente ekugqibeleni kwakhokelela kwiCrisis Crisis .
Imvelaphi yerhafu ye-1828
Intlawulo ye-1828 yayingomnye uchungechunge lweentlawulo ezikhuselekileyo ezidlulileyo eMelika.
Emva kweMfazwe ka-1812 , xa abathengisi baseNgesi baqala ukukhukula kwiMarike yaseMerika ngexabiso elincinci elithintela kwaye lisongela imboni entsha yaseMerika, i-US Congress yabe isabela ngokubeka umrhumo ngo-1816.
Lezo ntlawulo zenzelwe ukuba zikhusele, zithetha ukuba zenzelwe ukuqhuba ixabiso lempahla engeniswayo kwaye ngaloo ndlela zikhusele iifemu zaseMelika ezikhuphiswano lwaseBrithani.
Kwaye abazange bayithandeke kwezinye iindawo ngenxa yokuba iirhafu zahlala zikhuthazwa ekuqaleni njengemilinganiselo yesikhashana. Nangona kunjalo, njengoko amashishini amasha avela, iirhafu ezintsha zasoloko zibonakala ziyimfuneko ukuzikhusela ekukhuphiseni kwamanye amazwe.
I-1828 yentlawulo yaba yinxalenye yecwangciso lezopolitiko eliyinkimbinkimbi elenzelwe ukudala iingxaki kuMongameli John Quincy Adams . Abalandeli baka- Andrew Jackson bamthiyile uAdams emva kokukhethwa kwakhe kwi-"Corrupt Bargain" ukhetho luka-1824 .
Abantu baseJackson bavelisa umthetho kunye nemirhumo ephakamileyo kakhulu ekungeniselweni kwamanye amazwe okufunekayo kuMntla nakuMzantsi, ekucingeni ukuba umthetho-mthetho awuyi kudlula. Kwaye umongameli, bekucingwa, kuya kuthiwa ukungaphumeleli ukudlulisa ibhajethi yentlawulo. Yaye loo nto yayingamhlawulela phakathi kwabaxhasi bakhe eNtshona-mpuma.
Isicwangciso sasibuyiselwe xa i-bill bill ithunyelwe kwiNgqungquthela ngoMeyi 11, 1828. UMongameli uJohn Quincy Adams wasayina ekubeni ngumthetho. I-Adams ikholelwa ukuba umrhumo wawungumxholo olungileyo kwaye wawusayinwa nangona waqonda ukuba unokumlimaza ngezopolitiko kunyaka oluzayo lwe-1828.
Umrhumo omtsha owenzelwa imisebenzi enkulu yokungenisa i-iron, i-molasses, imimoya ephihliweyo, i-flax, kunye nempahla eyahlukeneyo. Umthetho wawungathandeki ngokukhawuleza, nabantu abahlala kwimimandla eyahlukeneyo bayayichitha amanqaku awo.
Kodwa inkcaso yayinkulu eMzantsi.
Ukuphikiswa kukaJohn C. Calhoun kuThiff of the Abominations
Inkqantosi enqabileyo ye-1828 yayikhokelwa nguJohn C. Calhoun, umbutho wezobupolitika ovela eSouth Carolina. UCalhoun wayekhulile emngceleni wee-1700s, kodwa wafundiswa kwiKholeji yaseYale eConnecticut waza wafumana uqeqesho olusemthethweni eNew England.
Kwizopolitiko kazwelonke, uCalhoun uye wavela, phakathi kwe-1820s, njengommeli ocacileyo kunye nozinikezele uMzantsi (kunye nakwiziko lobukhoboka, apho uqoqosho lwaseMzantsi luxhomeke khona).
Izicwangciso zikaCalouun zokugibela umongameli zaye zaphazamiseka ngenxa yokungabikho kwenkxaso ngo-1824, waza wagijima waya ku-vice-president noJohn Quincy Adams. Ngoko ngo-1828, uCalhoun wayengumongameli welo mntu watyikitya umrhumo owenziwe ngumthetho.
I-Calhoun Ishicilelwe i-Protest Strong Against the Tariff
Ngasekupheleni kwe-1828 uCalhoun wabhala isicatshulwa esithi "South Carolina Exposition and Protest," eyayingabhengezwa ngokungaziwa. (Kwiimeko ezikhethiweyo zeemeko, uCalhoun wayengenguye kuphela umongameli we-Adams eyimfanelo kodwa naye wayengumlingane osebenzayo no-Andrew Jackson, owayengumkhankaso wokutyunjwa kwe-Adams kunyulwa ka-1828 .)
Incoko yakhe uCalun wagxeka ingcamango yerhafu yokukhusela, echaza ukuba iirhafu kufuneka zisetyenziselwe ukukhulisa imali, kungekhona ukukhulisa ibhizinisi kwimimandla ethile yesizwe. Kwaye uCalun wabiza iSouth Carolinians "njengabasebenzi beenkqubo," ukuchaza indlela abaye baphoqelelwa ngayo ukuhlawula amaxabiso aphezulu kwiimfuneko.
Incoko kaCalhoun yanikelwa kwisigqeba saseburhulumenteni saseMzantsi Carolina ngoDisemba 19, 1828. Nangona ukuthukutheliswa koluntu ngaphezu kwemirhumo, kunye noCalhoun ukugxeka kwakhe ngamandla, umthetho wepalamente awuthathi nxaxheba phezu kwentlawulo.
Ukubhalwa kweengcoko kukaCalun kwagcinwa mfihlelo, nangona wenza umbono wakhe esidlangalaleni ngexesha leNkcenkcesho yokuLungisa, eye yavela xa ukukhutshwa kweerhafu kwaphakama kwi-1830s.
Ukubaluleka koThaff of Abominations
Intlawulo yeentsizi ayikhokele kuyo nayiphi na inyathelo elinyanisekileyo (njenge-secession) ngurhulumente waseMzantsi Carolina. Nangona kunjalo, umrhumo we-1828 ukwandisa intukuthelo enyakatho, imvakalelo eyadlulayo iminyaka emininzi kwaye yanceda ekukholeni uhlanga olujoliswe kwiMfazwe yoLuntu .
Yayiphi Indima Eyadlala Ngayo KwiMbali Yembali?
Movement American Lyceum
Funda iNkcazelo kunye neMbali yekota yeRobber Baron
I-Perl Array grep () Umsebenzi
Imfazwe Yehlabathi II: Iinqwelo
Quotes kaRobert Burns
Ukubetha Blackjack nge-Simple Plus Minus Count
Amakhadi eKrismesi Ukubuyisela amaSiriya aseMerika